Mpanamboatra Agent Dropshipping ambongadiny sy mpamatsy | Ara-potoana
Mpanampy amin'ny fandefasana entana Ny tombotsoan'ny entana ho an'ny mpandraharaha maniry, Dropshipping dia maodelim-pandraharahana lehibe satria mora ny miditra. Amin'ny fandefasana mivantana, azonao atao ny manandrana haingana ny hafa ...
Mpanampy amin'ny fandefasana
Ny tombotsoan'ny fanaterana entana
Fa naniry mpandraharaha, Dropshipping dia raharaha lehibe modely satria mora ny fidirana. Amin'ny fandefasana mivantana, dia afaka avy hatrany maka fanahy samihafa hevitra amin'ny raharaham-barotra voafetra fahadisoana, izay ahafahanao hianatra zavatra betsaka momba ny fomba hanaovana safidy sy hivarotra ny vokatra-tinady. Misy antony hafa koa mahatonga mivantana lahateny no tena tian'ny ankizy.
1. Less vola ilaina
Angamba ny tombony lehibe azo amin'ny fivarotana mivantana dia ny ahafahanao manokatra fivarotana e-varotra nefa tsy mila manambola dolara an'arivony amin'ny firaketana mialoha. Araka ny fomban-drazana, ny mpivarotra dia tsy maintsy mandany renivohitra be hividianana tahiry.
Miaraka amin'ny maodelin'ny fandefasana mivantana dia tsy mila mividy ny vokatra ianao raha tsy efa nanao varotra ary efa nahazo ny vola avy amin'ny mpanjifa. Azonao atao ny manomboka mividy vokatra ary manomboka orinasa mpivarotra mivantana mahomby amin'ny vola kely nefa tsy misy fampanjariam-bokatra mialoha be. Ankoatra izany, satria tsy mampanantena mivarotra amin'ny alalan'ny lisitra izay nividy mialoha antsinjarany toy ny nentim-paharazana, dia misy tsy mety ny fanokafana ny fivoahan'ny fivarotana.
2. mora ampiasaina
Rehefa tsy mila miatrika vokatra ara-batana ianao dia mora kokoa ny manao orinasam-barotra e-varotra. Amin'ny fandefasana mivantana, tsy mila miahiahy momba ny:
Management na fandoavam-bola trano fanatobiana entana
Fonosana ary alefaso ny baikoo
Hanara-maso ny lisitra noho ny antony ara-kaonty
Mizara tsara miverina sy ny mampihiditra ny entana
Manohiza manafatra vokatra ary tantano ny fanontana ambaratonga fanontana
Koa satria tsy voatery hiady amin'ny lisitra mividy na fitantanana trano fanatobiana entana, ny fandaniana ambony no ambany dia ambany. Raha ny marina, maro nahomby mivantana varotra an-trano fivarotana dia mifototra amin'ny raharaham-barotra, mila ihany ny ordinatera, ary ny sasany miasa matetika ataony fandaniana. Rehefa mitombo, ireo vola lany dia mety mitombo, fa mbola somary ambany raha oharina amin'ny fandraharahana ara-batana nentim-paharazana.
4. malefaka toerana
Ny orinasam-panaterana entana dia azo tanterahina saika amin'ny alàlan'ny Internet. Raha afaka mifandray amin'ny mpamatsy sy ny mpanjifa ianao dia afaka mihazakazaka sy mitantana ny orinasanao.
5. Vokatra maro isafidianana
Koa satria tsy voatery hividy ny vokatra amidy mialoha, dia afaka manome mety ho mpanjifa miaraka amin'ny isan-karazany ny vokatra malaza. Raha mitahiry entana ny mpamatsy dia azonao atao ny mitanisa ireo entana amidy ao amin'ny fivarotana an-tserasera nefa tsy mandoa vola fanampiny.
Mivantana varotra dia mahasoa lalana ho tompona fandraharahana izay manokatra toeram-pivarotana vaovao sy te-hitsapa ny mpanjifa 'hazoto homana ho an'ny sokajy vokatra hafa, toy ny Accessories na vokatra vaovao andalana. Toy izany koa, ny tombony lehibe amin'ny fandefasana mivantana dia ny fahaizany mitanisa sy mivarotra vokatra alohan'ny hanatanterahana ny fividianana tahiry be dia be.
7. Mora kokoa ny manitatra
Fa nentim-paharazana mpaninjara raharaham-barotra, raha mandray telo heny noho ny isan'ny didy, dia matetika mila manao in-telo ny asa. Amin'ny alalan'ny fampiasana fandefasana mivantana mpamatsy, ny ankamaroan 'ny asa fanodinana baiko fanampiny ho entina amin'ny mpamatsy, mamela anao bebe kokoa amin'ny olana sy ny fitomboana tsy mitombo miandalana, tsy asa.
Ny fitomboan'ny varotra dia hitondra asa fanampiny hatrany, indrindra ny asa mifandraika amin'ny fanohanan'ny mpanjifa, fa raha ampitahaina amin'ny orinasa e-varotra nentim-paharazana, ny orinasa mampiasa ny refin'ny fandefasana mivantana dia tena tsara.
Atombohy izao ny varotra mivantana anao
Teo aloha: Fitaterana an-dranomasina
Manaraka: Serivisy omena lanja